अरूलाई गाडी बन्द, प्रचण्डलाई खुला! (भिडिओ) « Bagmati Online
अरूलाई गाडी बन्द, प्रचण्डलाई खुला! (भिडिओ)
नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) प्रचण्ड-माधव नेपाल समूहको आमहड्ताल जारी छ। हड्तालमा सवारीसाधन आवागमनमा अवरोध गर्ने गराउने निर्देशन पार्टी ‘हाई कमाण्ड’ को छ। ‘हाई कमाण्ड’ भनेको अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ र अर्का अध्यक्ष माधवकुमार नेपाल हुन्। तर, यी दुई अध्यक्ष भने अरूलाई सवारीसाधन चलाउन नदिएर आफू भने गाडी चढेर बन्द हड्तालको अनुगमन गर्न र सहभागिता जनाउन पुगिरहेका छन्।
प्रचण्ड गाडी चढेरै हिँडे भने नेपाल स्कुटरमा कोटेश्वर पुगे। प्रचण्ड खुमलटारबाट सातदोबाटो, कोटेश्वरहुँदै पुल्चोक गएर पुन: खुमलटार फर्के। उनी खुमलटारबाट गाडी चढेर सातदोबाटो आए। त्यहाँबाट कोटेश्वर पनि गाडी चढेरै गए। कोटेश्वरबाट पुल्चोक पनि गाडीमै आए। उनी बा १७ च ३०७१ नम्बरको प्राडो चढेर आएका थिए। उनका अगाडि-पछाडि सुरक्षाकर्मी पनि थिए।
प्रचण्डकी स्वकीय सचिव गंगा दाहालका अनुसार खुमलटारबाट केही अगाडिसम्म पैदल हिँडेपछि प्रचण्ड गाडी चढेका थिए। उनी आन्दोलनमा सहभागी हुन बाहिर निस्केको दाहालले बताइन्। दाहाल करिब दुई घन्टा आन्दोलनमा सहभागी भएर खुमलटार फर्किएका छन्।
‘सातदोबाटो चोक मात्रै जानुपर्ने भएको भए त हिँडेर जानुहुन्थ्यो होला,’ दाहालले भनिन्, ‘तर, अन्यत्र पनि जानुपर्ने भयो।’ यति लामो दूरी हिँडेर छिचोल्न सम्भव नहुने भएकाले अध्यक्ष गाडीमा हिँडेको उनले बताइन्। गाडी चढेर हिँडेका प्रचण्ड पुल्चोकमा आएर सडकमै बसे। सडकमा बसेर चिउरा खाए। केहीबेर नाराबाजीमा सक्रिय भए। त्यसपछि उनी खुमलटार फर्किएका थिए।
अरूलाई गाडी चलाउन नदिएर आफू चाहिँ गाडी चढ्न मिल्छ? प्रश्नमा दाहालले भनिन्, ‘नेताहरू सबैठाउँमा पुग्नुपर्‍यो। हिँडेर सम्भव हुँदैन। उहाँ केही ठाउँमा हिँड्नुभएको छ।’ अर्का अध्यक्ष माधवकुमार नेपाल बा ५२ प ५८१४ स्कुटर चढेर कोटेश्वर चोक पुगेका थिए। उनी कार्यकर्ताले हाँकेको स्कुटर चढेर कोटेश्वर पुगेका थिए। नेपाल केहीबेर आन्दोलनमा सहभागी भएर खाना खान निवास फर्के। त्यसपछि पुन: कोटेश्वर पुगेका छन्।
राजधानीका विभिन्न ठाउँमा आमहड्तालमा नेताहरू खटाइएका छन्। युवराज ज्ञवाली र अष्टलक्ष्मी शाक्य कलंकीमा छन्। शाक्यलाई भने प्रहरीले पक्राउ गरेको छ। बेदुराम भुसाल बल्खु, देव गुरूङ सातदोबाटो, लीलामणि पोखरेल कोटेश्वर, हरिबोल गजुरेल र वर्षमान पुन चावहिल, शक्ति बस्नेत महारागञ्ज, भीम रावल गोंगबु, रघुजी पन्त बालाजु, नारायणकाजी श्रेष्ठ, जनार्दन शर्मा रत्नपार्क र पम्फा भुसाललाई पुल्चोकमा खटाइएको छ।